Hay’adda Socdaalka iyo Jinsiyadaha oo sheegtey in Norway aqoonsatey Baasaboorka Soomaaliya • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Federal Republic of Somalia / Hay’adda Socdaalka iyo Jinsiyadaha oo sheegtey in Norway aqoonsatey Baasaboorka Soomaaliya
Hay’adda Socdaalka iyo Jinsiyadaha oo sheegtey in Norway aqoonsatey Baasaboorka Soomaaliya
Posted: Mohamed Jeenyo - June 18, 2017
War ka soo abxay xafiiska Socdaalka iyo jinsiyadaha Soomaaliya ayaa lagu sheegay in dowlada Norwey aqoonsatay Baasaboorka Soomaliga ah gaar ah midka Diblomaasiga ah oo ay qaataan Madaxda Dowlada iiyo Siyaasiyiinta!.
Hay’adda Socdaalka warka ka soo baxay ayaa lagu sheegay in dhamaadka Sanadkan 2017 dowlada Norwey Soomaaliya u soo direysa khuburo u kuurgali doonaa habka lagu bixiyo Basaboorka Shaqaalaha ee iyo basaboorka shacabka ay qataan si ay dowlada Norwey u aqoonsato oo ay muwaadiniinta Soomaliyeed dal-ku galka u siin karto haddii uu buuxiyo shuruudaha.
Sido kale Agaasimaha Guud ayaa madaxda dowlada iyo dhamaan Soomalida heysta Basaboorada Shisheeye ka codsatay in ay ku safraan basaboorka Soomaaliga marka ay ku baxayaan magaca Soomaliya ayna ka qeybgalayaan Shirarka Caalamka.
Warka ka soo baxay hay’adda socdaalku ma sheegin xiliga Norway aqoonsatey baasaboorka cas ee Diblomaasiga, waxaana la is weydiin karaa waxa madaxda Soomaalida ee Norway imaan jirtey ay ku safri jireen markii hore.
Wasaaradda Arrimaha DIbadda ee Norway ayaan weli waxba ka beddelin qoraal 7 sano ka hor ay soo saartey oo lagu sheegayo in baasaboorka Soomaaliugu aanu dalkooda ka shaqeyn, waxaana la is weydiin karaa in ka qaadista xayiraada kan diblomaasiga ay tahay oo keliya kumeel-gaar.
Dalka Norway waxa uu safka hore uga jiraa dalal badan oo reer Yurub ah oo doonaya in Soomaali aad u badan dib ugu celiyaan Soomaaliya, waxaana ay sooc eliyeen xiriirkii Diblomaasiyadeed ee Soomaaliya xiligii Dowladdii Xasan Sheekh Maxamuud.
Raytsalwasaaraha Soomaaliya iyo Afhayeenka Baarlamaanka Federaalka, labaduba waxay haystaan dhalashada dalka Norway, dibna uma aysan celin weli.